KUMAAD DOORAN DOORKAN?! WQ- Mubarak Xaaji Maxamuud Caabi Qaybta 1aad. | Haqabtire News
KUMAAD DOORAN DOORKAN?! WQ- Mubarak Xaaji Maxamuud Caabi Qaybta 1aad.
July 14, 2017 - Written by admin
Marka ay timaado in ay ummad ka tashato aayaheeda mustaqbal, waxa lagama maarman ah in ay sameeso ummadaasi taxadar badan iyo ka fiirsasho xeel dheer, si aanay isu qoomamayn. Ta kale ee muhiim ka ah ayaa iyana noqonaysa in ay bulshadaasi ka dheeraadaan qof jeclaysi iyo danno gaar ah, oo ay ku dadaalaan danta iyo ujeedada guud ee laga siman yahay.
Waxa aan wada ognahay in insaanka ama ibnu Aadam ka ka buuxo degdeg iyo muran sida ku xusan quraanka kariimka. Arin ka aad qabanayso oo aad ka fiirsato, ka baaran degto oo waliba lafa gurtaa waxa uu ku horseedaa inta badan guul, ta Alle na waa meel.
Maan gaabnimadu waa adoo arki waaya ama saadaalin kari waaya ama wax ku qaadan waaya ficil aad samayso natiijada ka dhalan karta ama ka dhalatay. Marka aad gaadhayso go’aan saamayn ku yeelanaya mustaqbal kaaga iyo mustaqbal ummadeed ba, maaha wax sahlan oo degdeg iyo jibo lagu gaadho. Xanuunka imika bulshadu la il daran tahay ayaa ah qabiil ama qabyaalad, oo qofka waxba lama aha inuu mustaqbal kiisa u baabiyo HEBEL aan aqoon balse
la yidhi isku reer hebel ayaad tihiin.
Waxaan in badan is weydiiyaa, dadku wuu il baxay, waxbuu bartay laakiin qabyaaladu way kasii daraysaa halkii la suulin lahaa oo laga gudbi lahaa. Waxbarashada ayaa lagu qeexaa cilmiga nafsiga (Badelid uu qof ku u badalayo dabeecadiisa ama dhaqan kiisa si joogto ah), laakiin aqoonyahanka ama dadka waxbartay ayaaba ugu daran xaga isticmaalka ama ku dhaqanka qabyaalada. Alle khayrka ha ina waagajiyo. Aamiiin.
Waxa aynu u baahanay inaan caqliga ka korno, dhacdooyinka inasoo mara wax ka barano oo ka dhaxalno waayo aragnimo.Waayo waxaan inta badan aragnaa marka ay timaado doorasho, ha ahaato mid Madaxtooyo ama Golayaasha kala duwan, dad durbaano sita isla markaana maalmaha ololaha oo dhan ku qaylinaya ereyo ay ku taageersan yihiin musharaxa markaa uu wato. Suaasha isweydiinta leh ayaa ah, qof kaas maxa kaga soo noqda musharaxaa uu u heelanaa mudada dhan???
Waan ogahay inaad dhamaan si fiican uga dharagsan tihiin marka uu musharax ku guulaysto boosku uu rabay wax kale daayo inuu xitaa telephone ka ka qaban dadkii u xiiqsanaa ama uu badelaba number kiisa sida inta badan dhacda.
Ma xuma inaad masuul taageerto laakiin maxad u eegin ama dhinacaad ka eegin waxaad ku dooranayso ama ku taageersan tahay???
Su’aashaas jawaabteedu waa ta aan kaga hadli doono maqaalkan taxanaha inoo noqon doona insha allah.
Maqaal kaygan noqon doona taxane (hadii Alle idmo), waxa uu ka madhan yahay ama uu ka fogyahay qof jeclaysi iyo u ololeyn xisbi ama shikhsi gaara. Waa maqaal u hadlaya si guud, taabanaya oo kaliya astaamaha ama wax yaabaha laga rabo ama lagu doorto HOGAAMIYE UMMADEED.
Jamhuuriyada SOMALILAND waxa kusoo food leh doorasho, ha ahaato mid MADAXWEYNE ama GOLAYAAL. Cida wax doorataa waa bulshada, hadhaw cida la maamulaa waa bulshada. Hadaba bulshooy inta aanad cid dooran ama u ololayn ama cidla ka jiboon, ma isweydiisay su’aalahan:
1-Kumaad dooran doorkan?!
2-Maxaad ku dooran?!
3-Natiijo noocee ah ayey keeni kartaa mustaqbalka doorashadaadu?!
Hadaba maqaalkayga, waxan ku cabiri doonaa astaamaha loo baahan yahay ama muhiimka ah in uu yeesho MASUUL ummad matalayaa. Lasocosho wanaagsan.
“Hogaan aad qabyaalad ku dooratay ayaan horumar ku gaadhsiin”
Faralka iyo sunnahaba
Kursigayaga noo saar
Ruux saacidoo wacan
Kala sooca maatada
Kuwa sii il daranee
Ku sifooba baahida
Soor yeeya idilkood
Rabi sare ha geeyoo
Ha u sahlo hogaankana
© Mubarak Xaaji Maxamuud Caabi